Manisy Hisatra Amin’Ireo Film Tsy Miankina Ny Ao Kiobà · Global Voices teny Malagasy
Manisy Hisatra Amin'Ireo Film Tsy Miankina Ny Ao Kiobà
Voadika ny 18 Avrily 2014 19:48 GMT
Claudia Calviño, mpamokatra sarimihetsika mahaleotena ao Kiobà. (Saripika Raquel Pérez)
Tsy nahazoana alalana hotontosaina ny film lava roa sy film fohy iray na dia efa nahazo ny famatsiambola ilaina ho amin'izany aza. Navoakan'ny Minisiteran'ny Atitany (MININT amin'ny teny espaniola) ny fitsipahana rehefa nohamarinina am-bolana maro ny fizotran'ny fanatontosana (script) sy ireo ekipa teknika miandraikitra ny tetikasan-tsarimihetsika tontosaina ao amin'ny nosy.
Teo aloha dia ny Ivotoerana Kiobàna misahana ny Zavakanto sy Orinasa Ara-Tsarimihetsika (ICAIC amin'ny teny espaniola) sy ny Minisiteran'ny Kolontsaina no tompon'andraikitra amin'ny fanamarinana sy ny fanekena ny fizotran'ny fanatontosana.
Ho fanehoana ny tsy fahafaliany amin'ity fepetra vaovao ity, dia nanoratra taratasy ho any amin'ny ICAIC sy ny Minisiteran'ny Kolontsaina ireo mpanatontosa sarimihetsika maromaro. Jorge Perugorría, Kiobàna mpanatontosa sarimihetsika malaza sady kintan'ny film “Fresa y Chocolate” [Frezy sy Sôkôlà], niteny [es] fa misy ny “fomba fihevitra iraisana” eo amin'ny artista fa tsy misy fampandrahara ankoatra ny ICAIC na ny Minisiteran'ny Kolontsaina mahazo mijery mialoha ny tantara avadika ho sarimihetsika.
Tao amin'ny fanambarana ho an'ny gazety mivoaka isan'andro espaniola, El País [es], dia nampian'i Perugorría fa “mbola sarotra ny manatontosa sarimihetsika any Kiobà, indrindra rehefa amin'ny fotoanan'ny krizy satria zavatra hafa no ataon'ny governemanta ho lahara-pahamehana.” Saingy, “noho ny medi nomerika sy ny fahafaha-manatontosa sarimihetsika tsy andaniam-bola be, dia mbola mahavokatra sarimihetsika mahaliana fito na valo ao anatin'ny taona iray ny sinema mahaleotena, izay azo jerena ho ohatra avy amin'ity sinema eo am-pivelarana ity.”
Mandritra izany fotoana izany, dia milaza ny fahalafosan'ny fahazoana alalana hanao film ao amin'ny faritra sasany ao amin'ny firenena izay vatomisakana ny sinema kiobàna ny mpamokatra sarimihetsika mahaleotena Claudia Calviño. “Mandidy ny handoavana sara 500 CUC [peso kiobàna azo avadika vola vahiny] isan'ora amin'ny fakana sary ao afovoan-tanànan'i Havana Tranainy ny Ofisin'ny Tantaran'ny Tanàna,” hoy i Calvino. Araka ny nolazain'ny mpanatontosa sarimihetsika Enrique Alvarez, dia tsy ho avoaka ampahibemaso ny fanambarana. Hoy i Alvarez:
Fanambarana ataonay amin'ny andrimpanjakana ato aminay io, satria tianay ny andrimpanjakana ato aminay mba ho ireo izay mijoro ho mpiaro ny maha-andrimpanjakana azy ka ry zareo ihany no manome na tsia ny alalana amin'ny karazan-javatra tahaka itony, izay efa fanao hatramin'izao fotoana izao. Ary anjaranay no miady hevitra na mitolona isak'izay manome alalana ry zareo na tsia.
Tao amin'ny fivoriana tontosa hatramin'ny farany vao haingana teo amin'ny Sendikàn'ny Mpanoratra sy ny Artistan'i Kiobà, dia nanamarika i Álvarez [es]:
nunca como hoy la producción cinematográfica se ha extendido por todo el país. Documentales, largos y cortos de ficción se realizan en cualquier rincón con la calidad profesional suficiente como para representar a nuestra cinematografía.
Tsy mbola niely tamin'ny firenena tahaka izao ny famokarana film. Na fanadihadiana na tantara foronina na fohy na lava, dia vita any amin'ny isaky ny sakeli-dalana rehetra any, amin'ny kalitao matihanina mba hisolotena ny tontolon'ny sinema antsika.